भारतमा एक्काइसौ शताब्दीमा दुर्लभमा पनि महा दुर्लभ व्यक्तित्व मन्त्री,जोसंग मोबाइल छैन – www.agnijwala.com
भारतमा एक्काइसौ शताब्दीमा दुर्लभमा पनि महा दुर्लभ व्यक्तित्व मन्त्री,जोसंग मोबाइल छैन
भारतमा नरेन्द्र मोदीले दोश्रो कार्यकालको लागि सपथ लिए पछि उनको मन्त्रि मण्डलमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका दुई चक्र बाहन (साइकल )चलाउने र एक खरको घरमा बसोबास गर्ने अत्यधिक सामान्य व्यक्तिलाई मन्त्रि पद दिदै सपथ गराएका छन् ।
मोबाइल समेत आफु संग नभएका प्रताप सारंगीको चर्चा परिचर्चा बिश्व ब्यापी भएको छ । उनले सपथ लिई रहदा राष्ट्रपति भवन कर्तल ध्वनिले गुन्जयमान भएको थियो ।
उनलाई सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम, पशुपालन, दुग्ध तथा मत्स्य पालन मंत्रालय विभाग सुम्पिएको छ । सपथ लिना साथ उनि माथि सामाजिक सन्जालमा ७ वटा अपराध फौजदारी (अपराधी ) मुद्धा दायर गरिएको भै ब्यापक भएको छ ।
उनि यति सम्म सरल कि नुहाउन सार्वजनिक रुपमा राखिएको धारामा नुहाउछन । उनि भारतको ओडिसाबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उनलाई ओडिशाका मोदी भनेर अनि चिनिन्छ । गरिव सारंगीले बिजेडीका उम्मेदवार अर्बपति र रबिन्द्र जेनालाई हराएका छन् । अहिले सम्म उनि अबिबाहित छन् । गत बर्ष उनले आफ्नी आमा गुमाए ।
को हुन् प्रताप चन्द्र सारंगी ?
ओडिशाको नीलगिरिमा गरीब परिवारमा जन्मेका ६५ बर्षिय प्रताप चंद्र सारंगी अविवाहित हुन् । नीलगिरिको फकीर महाविद्यालयबाट स्नातक गरेका छन् । सन् २००४ सन् २००९ मा नीलगिरिबाट विधायक पनि भएका थिए । तर सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा बीजेडी का रबींद्र जेना संग पराजित भएका थिए ।
हालै सम्पन निर्वाचनमा उनका निकटम प्रतिद्वन्धि रबिन्द्र जेनालाई करिव १३ हजार मत द्वारा हराएका छन् । सारंगीको जीवनका कैयौ कुराहरु मोदी संग मेल खान्छ । सानै देखि यिनी निकै आध्यात्मिक थिए । उनि जोगी बन्न रामकृष्ण मन्दिर गएका थिए तर उनलाई तिम्रो आमा जिउदो छिन् भनि उनलाई फर्काई दिएका थिए ।
उनि त्यसपछि समाज सेवामा जोडिए पछि आदिवासी क्षेत्रमा बिद्यालय खोले र गत बर्ष आमाको निधन भएको थियो । उनि समाज सेवा दुई चक्र बाहन लिएर घुम्छन । सन् २०१७ मा उनको मोद संग चिनजान भएको थियो ।
उनि कुन क्षेत्र बाट बिजयी भए ?
ओडिशाको बालासोर लोकसभा क्षेत्रबाट बीजेडीका रबिन्द्र कुमार जेना लाई १२९५६ मतले हराएका थिए । बालासोर स्थानमा १९५१ ,१९५७ , १९६२ मा कांग्रेसले जितेको थियो । यसै गरि १९६७ मा कम्युनिस्ट पार्टी अफ इंडियाले उक्त स्थानमा बिजयी हासिल गरेका थिए । १९७१ मा पुन कांग्रेसले जितेको थियो ।
१९९८ को निर्वाचनमा बीजेपी ले पहिलो पटक चुनाव जितेको थियो ।